पृथ्वी नष्ट हुने रहस्यको एक पर्दा खुलेको अन्वेषकको दावीले दुनियाँ झस्कियो ! – Sanchar Patrika
पृथ्वी नष्ट हुने रहस्यको एक पर्दा खुलेको अन्वेषकको दावीले दुनियाँ झस्कियो !
October 9, 2020 174
काठमाडौं । बेला बेलामा पृथ्वी नष्ट हुँदैछ भनेर विश्व भर हल्ला हुने गर्दछ । कति कुराहरु अनुमानका आधारमा भनिएको भए पनि केही वैज्ञानिक आधारहरु पनि प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तनले मान्छेहरुलाई केही वर्षपछि बाँच्न गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले पनि भन्ने गरिएको छ ।
विश्वका धेरै शहरहरु वायु प्रदुषर्णलगायत अनेक समस्यासँग जुध्दै छन् । यो बीचमा पृथ्वी नष्ट हुने रहस्यको एक पर्दा खुलाउन गइरहेका छन् । इजिप्टमा २,५०० वर्ष पुरानो चिहानहरू फेला परेसँगै नयाँ रहस्य खुल्न आएको हो । इतिहासमा पुरिएका रहस्य र कथाहरूको बारेमा छलफल भएको छ । यो मात्र होईन, कोठा कैरोको दक्षिणपूर्व अबूसीर नेक्रोपोलीस (कब्रिस्तान) मा भेटियो जहाँ शाही नेता खेन्टकोसलाई पुरिएको थियो ।
खेन्टकोसको चिहानका अन्वेषकहरूले त्यस समयका खतराहरूबारे अनुसन्धान गरेका छन् । उनीहरु दावी गर्दछन् कि इतिहास आफैंमा दोहोरिन सक्छ । तिनीहरू भन्छन कि संसारको अन्त स्वीकार गरेर यसलाई बचाउन कोशिस गर्न सकिन्छ ।
उनको लोग्ने फिरऊन नेफरफ्रेलाई खेन्टकोसबाट ६५० फिट टाढा पुरिएको थियो । नयाँ खोजले परियोजना नेता प्रो. मिरोस्लाभ बार्टालाई मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले यसलाई पुरानो साम्राज्यको कालो ठाउँ भन्छन् । चेक इन्स्टिच्यूट अफ इजिप्लोलोजीको टीम विश्वास गर्दछ कि यहाँ भेटिएका शिलालेखहरूले त्यस समयको बारेमा अधिक जानकारी दिन्छ ।
मानव अवशेष र शिलालेख बाहेक, पुरातत्वविद्हरूले त्यहाँ माटोले, काठको काम, तामा र जनावरहरूको हड्डी फेला पारेका छन् । तिनीहरूले केन्टाकोस कसरी बाँचे र भविष्यको बारेमा उनको डर पनि चिनिन्छ भनेर देखाएका छन् । प्रोफेसर बार्ट भन्छन् कि यो त्यो समय थियो जब पुरानो राज्यले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्यो । प्रजातन्त्र बृद्धि भइरहेको थियो, वंशवाद देखा पर्दथ्यो, चासो समूह र जलवायु परिवर्तनले न केवल पुरानो राज्यलाई तर त्यस मध्य र पश्चिमी युरोपको पनि अन्त्य गर्‍यो ।
पानीको अभावका कारण बाली राम्रो थिएन र मानिसहरूले कर संकलन गर्न सकेनन् । करको अभावका कारण राज्यको विकास हुन सकेन । न त राज्यको विचारधारा र एकता कायम हुन सकेन । प्राध्यापक बार्ट भन्छन् कि वर्तमान मौसम परिवर्तन इतिहास दोहोरिएको देख्न सकिन्छ । उनी भन्छन कि इतिहास पढेर सिक्न सकिन्छ ।
उनले भने कि यो खोजले इजिप्टको लागि केहि वर्ष लिन सक्दछ । उनले खेन्टकोसको चिहानबाट सिक्ने र यस पटकको इतिहासमा भएको प्रलय रोक्न आशा गरेका छन् । उनले भने कि यदि हामी त्यहाँ अन्त्य हुन्छौँ भनेर स्वीकार गर्छौं भने हामी सभ्यताको पुनर्निर्माण गर्न सक्दछौं ।
Prevइच्छा नभएको बेला शारीरिक सुखप्राप्ति गरेको श्रीमतीको मुद्धामा श्रीमान कारागार चलान
Nextओलीसँगको संगतले अहिले प्रचण्ड धुरुधुरु रुनु परेको छ : भट्टराई
घर जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्, सरकारले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना !
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकियो, के के भयो निर्णय ?